Daawo Muuqaal: Maku sameyn laheyd sidan oo kale hadii ay gacalisadaada garab kaaga baahnaan laheyd? | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Arimaha Bulshada » Daawo Muuqaal: Maku sameyn laheyd sidan oo kale hadii ay gacalisadaada garab kaaga baahnaan laheyd?
Daawo Muuqaal: Maku sameyn laheyd sidan oo kale hadii ay gacalisadaada garab kaaga baahnaan laheyd?
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 5-08-16 3:52 PM Dunida aynu ku nool nahay kama dhamaadaan waxyaabaha la yaabka leh ee ka dhaco marwaliba, Maalin waliba waxaa soo baxo muuqaal ama dhacdo kaa yaabineysa taas oo ku yax yax gelineysa.
Sida caadada inoo ah Shabakada Somalistars waxa ay isku howshaa sidii ay idin kugu soo gudbin laheyn dhacdooyinka qariibka ah ee ka dhaca dunida aynu dusheeda saaran nahay.
Hadaba muuqaalka maanta aan idin soo helnay waxa uu ku tusinayaa lamaanaha qaar ineysan dhibaatada isla qeybsan, hadii ay si lama filaan ah lamaanaha wada socda mid uu dhibaato u qabsado kan kale uu ku fiirsanayo.
Daawo Muuqaal Naxdin badan oo lagu soo bandhigay Boggaga bulshada.